Ndakabatwa nemukadzi wangu ndichisvira step-daughter yangu! – Makuhwa.co.zw
Ndakabatwa nemukadzi wangu ndichisvira step-daughter yangu!
Wakanga uri musi weFriday kubasa kwaibhowa saka ndakati rega ndiende kumba early, ndichisvika pamba ndakangoona kamwe kamufana kachibuda mumba mangu kachimhanya kasina kupfeka shirt.
Ndakasara ndopinda mumba ndokuwana Lucy ari muroom make achiratidza kuti pane zvandakanganisa. It so happens kuti Lucy akatiza kuchikoro kuti awuye neboyfriend yake kumba nekuti aiziva kuti inini namai vake tese tainge tirikubasa.Lucy akaramba akanditarisa achiratidza kuti achiri nezemo plus ndainge ndamutadzisa zvaaiita. Lucy akatanga kutaura senyaya achiti ndaneta nekutamba nevana vediki vasingazive zvavanoita.
Zvamunoziva kuti munhu kana une zemo unoiita anything kuti upedze chikara chako. Lucy akauya akagara paside pangu calling me daddy achingoita zvinhu zvaasingaite mazuva ese. Apa ainge akapfeka kamini skirt asina pant. Handizivi kuti ainge akanganwa kupfeka here or she did it kuti ndizvione. Pandakaona kuti haana pant mboro yangu yakabva yaita kuvhunduka ichitanga kumira, Lucy noticed it akabva aibata semunhu aita mistake ndokuti sorry daddy. Yaingova bhaizi she did it achiziva nekuti aida kuona kuti inini ndinoita sei, akaramba akagara next to me achingoitarisa but asingazive kuti anonditanga sei since ndaiva baba vake.
Lucy started kungoita mastaera achitaurisa zvaasingaite mazuva ese, akabva arara pamakumbo ndokuti daddy nditariseiwo mumusoro mangu muri kurwadza apa. Ndakatarisa musoro wake ndikaona hapana kana chinhu, apa iye ainge akatorara pamboro yangu yainge yakamira zvisingaite. Akatanga kuipuruzira nemusoro wake achingoti apa kani daddy, izvi zvakandipa kuti ndinzwe ropa mumuviri mangu kuti zhiririri kuita kunge munhu ane mwedzi asati ambosvira. Ndakazongoona ruoko rwangu rwava mukati met-shirt yake ndakutombisa tuminyatso kwake, haana kana kuvhunduka nekuti ndizvo zvaaitoda. Pakaona izvi akabva awana simba ndakanzwa zip yangu ichivhurwa ndokuburitsa mboro yangu akabva atanga kuibonyora slowly slowly pasina chinguva yainge yaiswa mumuromo. Ndakanzwa kudziya kuti iri ropa nderemwana mudiki zvakaita kuti mboro yangu iwedzere kumira, ndakaita mubvunzo kuti mwana achiri kuVarsity ainge akutoziva zvinhu zvakadai rini.
Related Topics:Ndakabatwa nemukadzi wangu
Kusvirana nemusikana wangu mubathroom paAirport!